Nhau - Nyowani Chigadzirwa kuvhurwa- RGB Dynamic Curtain LED Strip & RGB Dynamic LED Panel
Nyowani Chigadzirwa kuvhurwa- RGB Dynamic Curtain LED Strip & RGB Dynamic LED Panel
Tiri kusundidzira maviri mhando yeNew chigadzirwa - Dynamic Curtain RGB LED Strip & Dynamic RGB LED Module.
Chivako chega chega chinotaura nyaya, uye ndizvo zvinoitawo mukati. Izvo zviri nyore-kuvaka-zvine simba lightbox LED mapaneru kubva kuHYM Mwenje inogona kukubatsira iwe kuumba iyo nyaya. Iyo modular dhizaini inova nechokwadi chekuti inokodzera chero yemukati, hombe kana diki, ine mwero kana yakasarudzika. Nakidzwa nekusiyana-siyana kwayo, zuva nezuva, gore negore. Kana iwe ukafunga kushandura zvemukati mako, unogona kushandura zviri nyore lightbox kudhinda uye kupopota naro.
Iyo Dynamic LED mapaneru anokubatsira iwe kugadzira inovaka mapurani munzira mbiri:
Ita kuti kupenda kuve kwehupenyu kana kuwedzera kufamba uye kunoshamisa mamiriro kune madziro uye siringi
Zviri nyore kwazvo kushandura chinyorwa kana LED zvirimo. Gadziridza yako yekufananidza padenga padenga zvinoenderana nemwaka, semuenzaniso: kunaya makore muchirimo, kunovira muzhizha, kunaya mukudonha uye sinou munguva yechando.
Iyo Dynamic RGB Curtain LED Strip yekubatsira iri nyore kuisa, isu tinogamuchira K-8000C kadhi yekudzora kuronga iyo LED.
Iyo Dynamic RGB LED Panel inotora K-8000C yekadhi yekudzora kuronga iyo LED neDMX512 protocol.
Kubva nhasi zvichienda mberi, machira uye LED kuti vataure mutauro mutsva ndiko kushanduka kweshanduko kwayo, kutyora iyo static uye kumisikidzwa kwenyaya nekuda kweiyo LED haisisiri kumira asi inogona kufambiswa.
Saka inogona kutsanangura kudhinda pamufananidzo wejira uye nekupa mwenje wakaringana iyi inzvimbo nyowani yekudzoka kumashure, iyi ndeyekumisikidza shopu, shopu Windows, showroom, zviitiko, kuratidzwa kwehunyanzvi hutsva , Iyo inoumbwa nealuminium dhizaini uye yakasarudzika machira akafukidza, asi bvarura iyo pateni kumashure kweiyo LED module, inogona maererano newe iwe kuda kuti uwane inoonekwa mhedzisiro yechirongwa pairi.
Mhedzisiro ndeye static chifananidzo nekufamba kwechiedza uye kuve kujeka kumuka nguva dzose kunotarisa pane zvitsva mafambiro uye matekinoroji matsva, kuvapfumisa, zvichivaita kuti vawedzere kukwezva uye kunakidze. KUSHANDISA software-K-8000C kuronga kweiyo LED, zvirongwa zveLED zvichachinja zvinoenderana nemufananidzo wekudhinda nguva nenguva. Naizvozvo, mashandiro ari nyore kwazvo: aluminium alloy mamiriro uye backlight system inoramba yakafanana, asi kuti uwane icho chigadzirwa chitsva, chinongoda chete kuchinja nzira iyo zvinhu zvemwenje uye nhare zvinogona kunge zvine simba uye shanduko yakapusa ndiyo hwaro hwemangwana midziyo.